पुडासैनी प्रकरण : २२ बर्षे जवान अस्मिता दुधले नुहाएकी छैनन् ? पढ्नै पर्ने ब्लग
यहाँ २२ बर्षे जवान अस्मिता दुधले नुहाएकी छैनन् । उनलाई शालिकराम विवाहित हो भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । नत्र उनी कुनै पुरुषसंग सजिलै कोठामा बस्ने थिइनन् । उनले काम गर्ने ठाउँमा समेत सबैले श्रीमान/श्रीमति भन्दा पनि उनलाई आ’पत्ति थिएन ।
आ’पत्ति तब भयो जब शालिकराम कि श्रीमतीले यिनीहरुको खेल थाहा पाइन । अस्मितालाई डर भयो सम्झनाले थाहा पाएपछि सम्झनाले यिनीहरुलाई बाँकी राख्ने छैनन । यहि वीच ट्रेण्डिङ्गमा रहेको छवि/शिल्पा काण्डले पनि अस्मिताको दिमागमा स्ट्राइक गर्यो ।
आफ्नो हविगत पनि त्यस्तै हुने पिर लाग्न थाल्यो । अब आफ्नो क्यारियरलाई समेत दाउमा राखेर शालिकरामको पछि लाग्नुको कुनै अर्थ थिएन । त्यसैले अब उनी शालिकरामबाट छुटकारा पाउन चाहन्थिन ।
तर आफ्नो श्रीमतीलाई समेत धो’का दिईरहेका शालिकराम अस्मितासँगको अवै’ध सम्ब’न्धमा यति नि’र्लिप्त भैसकेका थिए कि श्रीमतीले पनि थाहा पाउनु र अस्मिताले पनि छोडेपछि उनी विक्षि’प्त भए ।
शालिकराम विक्षि’प्त भएपछि रातोदिन अस्मितालाई पछयाउन थाले । त्यसबाट छुटकारा पाउन अस्मिताले रवि लामिछाने र उनको टीमलाई आफ्नो कहानी सुनाईन र शालिकरामबाट छुटकारा दिलाउन हार गुहार गरिन ।
रविलाई के थियो उनी यस्ता का’ण्ड भण्डाफोर गर्न माहिर खेलाडी ! त्यसमाथि, कुनै बेलासंगै काम गर्ने साथी, त्यो पनि अर्को च्यानलमा उस्ताउस्तै कार्यक्रम गर्ने प्रतिस्पर्धीका बारेमा यस्तो खबर पाउँदा उनको नेचरले उनलाई नकुत्कुत्याई रहन सकेन ।
आत्महत्या नै किन रोजे भनेर भन्दा यो लधुकथा बुझौ –
एउटा गाउँमा एउटा दुष्ट रहेछ । म’र्नेबेलामा प्रायश्चित गर्दै गाउँलेलाई भनेछ ‘मैले तपाईंहरुलाई साह्रै दु:ख दिए, यो सब मेरो मुखले गर्दा हो । अब म म’रेपछि मेरो मुखमा बाँसको ठेंडि कोचिदिनु होला । त्यसो गर्नुभयो भने मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ ।
पछि पुलिसले उसको ‘सुसा’इड नोट’ भेटेछ, त्यसमा लेखिएको रहेछ – ‘मेरो मुखमा बाँस कोचि-कोचि ‘गाउँलेले मलाई मा’रे ’!?
अर्थात, दुष्ट दुष्ट नै हो । श्रीमती हुँदहुँदै गर्लफ्रेनसँग बस्नु दु’ष्ट्याइं नै हो भने अहिलेका जीवित तिनै अभियुक्तहरु पनि दुष्ट नै हुन् । अब सबैले गच्छे अनुसारको दण्ड सजाय पाउनै पर्छ । अनि मात्र न्यायको जित हुन्छ ।
लागु पदार्थ, रक्सी आदिको लत बरु छुट्ला र त्यति हानि नगर्ला जति पर स्त्री/पुरुष गमनको लतले बर्बाद बनाउछ ! इज्जत, धन सबैथोक स्वाहा मात्रै पर्दैन अनाहक ज्यानै पनि जान्छ !